Change Password not work [fixed] - MYSTERY ZILLION
မူလ › About Forum › MZ News ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
saturngod April 2010 edited May 2010 in MZ News အခု vbulletin နောက်ဆုံး version upgrade လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ change password က အလုပ်မလုပ်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အခု vbulletin ကို တချက်မေးထားပါတယ်။ change password, forget password တွေ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တကယ်လို့password ဝင်မရခဲ့ရင် saturngod at mysteryzillion dot com ကို မေးပို့ပြီး password ပြောင်းဖို့ပြောနိုင်ပါတယ်။vbulleting က အဖြေရတာနဲ့ အမြန်ဆုံး fixed လုပ်ပေးပါ့မယ်။Fixed မှတ်ချက်များ
eagle2010 May 2010 edited May 2010 Registered Users ကျွန်တော့် ယူဇာနိမ်း nayray ပါ ကိုစေတန်....ကျွန်တော် ပီအမ်လည်းပို့ထားပါတယ်.. ခုထိတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြန်မပြောသေးလို့ ကျွန်တော်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိလို့ပါ...ကျွန်တော့်ကို အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် ကူညီပါဦးဗျာ.. သူငယ်ချင်းအကောင့်ကို ယူသုံးနေရတာ အားနာနေလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla